Aston Villa vs Bolton - BBC News Somali
Aston Villa waxaa tababare cusub loogu magacaabay Gerard Houllier, oo kooxda qaban doona Isniinta.
Aston Villa waxay horay 1-0 uga soo badisay Everten, waxaa iyadana 2-1 kaga adkaaday Stoke. Horayna waxaa 6-0 kaga adkaaday kooxda Newcastle. Kulankeedii ugu horeeyayse waxay 3-0 ku tuntay kooxda West Ham.
Kooxda Bolton ilaa hadda ciyaarihii ay dheeshay: Ciyaarteedii ugu dambaysay 4-1 waxaa kaga badisay Arsenal oo garoonka emirates ay isku heleen. Waxay horay barbarro 1-1 ah ula gashay kooxda Birmingham. Waxay 3-1 kaga adkaaday West Ham. Ciyaarteedii ugu horaysayna 0-0 ayay ku kala baxeen kooxda Fulham.
Aston Villa 6 dhibcood ayay leedahay afartii kulan ee ay horay u yeelatay, halka Bolton ay shan ka leedahay.
Labadan koox sadexdii kulan ee ugu dambeeyay 5-1, 4-2 iyo 4-0 dhamaan waxaa ku badisay kooxda Aston Villa oo goolal badan mar walba kaga adkaanaysay kooxda Bolton.
Bolton wali ma guulaysan ilaa todoba jeer oo ay kulmeen Aston Villa. Markii ugu dambaysay ee Bolton ay ka badiso Aston Villa waxay ahayd bishii December sanadkii 2006.